ESI EGBOCHI NỌMBA NA ANDROID - N'IHI BEGINNERS - 2019
Ọ bụrụ na ị na-emegharị site na oku site na nọmba ụfọdụ ma ị nwere ekwentị gam akporo, ị nwere ike igbochi ọnụ ọgụgụ a (tinye ya na blacklist) ka ị ghara ịkpọ ya, ma mee ya n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche, nke a ga-atụle na ntụziaka .
A ga - atụle ụzọ ndị a iji gbochie ọnụ ọgụgụ ahụ: iji ngwaọrụ ndị a wuru n'ime gam akporo, ngwa ndị ọzọ iji gbochie oku na-achọghị na SMS, yana iji ọrụ kwesịrị ekwesị nke ndị ọrụ mmezi telivishọn - MTS, Megafon na Beeline.
Igodo mkpọchi ekwentị
Maka mmalite na esi egbochi ọnụọgụgụ site na ekwentị gam akporo n'onwe ya, na-ejighi ngwa ọ bụla ma ọ bụ (mgbe ụfọdụ ụgwọ ọrụ).
Akara a dị na ngwaahịa Android 6 (na nsụgharị ndị mbụ - enweghị), nakwa na Samsung igwe, ọbụna na osọ os os.
Iji gbochie nọmba na "dị ọcha" Android 6, gaa na listi oku, wee pịa ma jigide kọntaktị ịchọrọ igbochi ruo mgbe menu gosipụtara na nhọrọ nhọrọ.
N'ime ndepụta nke omume ndị dịnụ, ị ga-ahụ "nọmba mkpọchi", pịa ya na na ọdịnihu na ị gaghị ahụ ọkwa ọ bụla mgbe ị na-akpọ site na nọmba a kapịrị ọnụ.
Ọzọkwa, nhọrọ nke nọmba egbochiri na Android 6 dị na ntọala ngwa ekwentị (kọntaktị), nke a ga-emeghe site na ịpị atọ isi na nchọta ọchụchọ na elu ihuenyo ahụ.
Na ekwentị Samsung na TouchWiz, ị nwere ike igbochi nọmba ahụ ka a ghara ịkpọ gị n'otu ụzọ ahụ:
Na ekwentị na nsụgharị ochie nke gam akporo, mepee kọntaktị ịchọrọ igbochi, pịa bọtịnụ menu ma họrọ "Tinye na listi ojii".
Na ọhụrụ Samsung, na "Ngwaọrụ" ekwentị n'elu nri "More", wee gaa na ntọala ma họrọ "Oku mkpọchi".
N'otu oge ahụ, n'eziokwu, oku ahụ ga-aga "," ị gaghị ezigara ha ozi ọma, ma ọ bụrụ na achọrọ ka a kwado oku ma ọ bụ onye na-akpọ gị inweta ozi na nọmba adịghị, usoro a agaghị arụ ọrụ (mana ndị na-esonụ ga-eme).
Ozi ndị ọzọ: na Njirimara kọntaktị na gam akporo (gụnyere 4 na 5) enwere nhọrọ (nke dị site na kọntaktị kọntaktị) iji zipu oku nile na ozi olu - a ga-ejikwa nhọrọ a dị ka ụdị mkpọchi ịkpọchi.
Kpọọ akpọ na ngwa ngwa Android
Na Ụlọ Ahịa Play, e nwere ọtụtụ ngwa iji gbochie oku site na nọmba ụfọdụ, yana ozi SMS.
Ngwa ndị dị otú ahụ na-eme ka ị nwee ike ịmepụta ndepụta nchịkọta ojii (ma ọ bụ, Kama nke ahụ, ndepụta ọcha), mee ka oge gbochie, ma nweekwa nhọrọ ndị ọzọ bara uru na-enye gị ohere igbochi nọmba ekwentị ma ọ bụ nọmba niile nke otu kọntaktị.
N'etiti ndị dị otú ahụ ngwa, na ndị kasị mma reviews reviews nwere ike mata:
Ihe nkwụsị ịkpọ oku site na LiteWhite (Anti Nisance) bụ ezigbo oku na-egbochi ngwa ngwa na Russian. //play.google.com/store/apps/details?id=org.whiteglow.antinuisance
Mazi. Ọnụ ọgụgụ - ọ bụghị nanị na-enye gị ohere igbochi oku, ma dọrọ aka ná ntị banyere nọmba enyo na ozi SMS (ọ bụ ezie na amaghị m otú o si arụ ọrụ maka nọmba ndị Russia, n'ihi na a sụgharịrị ngwa ahụ na Russian). //play.google.com/store/apps/details?id=com.mrnumber.blocker
Kpọọ Blocker - ngwa dị mfe maka igbochi oku na ijikwa ndepụta ojii na nke ọcha, na-enweghị ndị ọzọ akwụ ụgwọ (n'adịghị ka ndị a kpọtụrụ aha n'elu) //play.google.com/store/apps/details?id=com.androidrocker.callblocker
Dịka iwu, ngwa ndị dị otú ahụ na-arụ ọrụ na "ọ bụghị ngosi" nke oku, dị ka ngwaọrụ gam akporo ngwaọrụ, ma ọ bụ na-ezipụ ozi mgbaàmà na-akpaghị aka mgbe oku na-abata. Ọ bụrụ na nhọrọ dị otú ahụ iji gbochie nọmba ga-adịrị gị mma, ị nwere ike inwe mmasị n'ọdịnihu.
Ọrụ "Black List" site n'aka ndị na-arụ ọrụ ekwentị
Ndị na-edugharị ndị na-agagharị agagharị na-enwe na mpọpụtakwa ọrụ iji gbochie nọmba ndị ana-achọghị ma tinye ha na listi ojii. Ọzọkwa, usoro a dị irè karịa omume na ekwentị gị - ebe ọ bụ na ọ bụghị nanị mkpọtụ a na-akpọgide ma ọ bụ enweghị ozi ịmara banyere ya, ma ya zuru oke igbochi, i.e. Onye na-akpọ oku na-anụ "Akpanyere ngwaọrụ ndị a kpọrọ akpọ ma ọ bụ pụọ na mkpuchi netwọk" (mana ị nwekwara ike ịhazi nhọrọ "Arụ ọrụ," ma ọ dịkarịa ala na MTS). Ọzọkwa, mgbe ọnụ ọgụgụ ahụ na-agụghị akwụkwọ, SMS na nọmba a na-egbochikwa.
Rịba ama: Ana m akwado onye ọrụ ọ bụla iji nyochaa arịrịọ ndị ọzọ na saịtị ndị dị mkpa - ha na-ahapụ gị ka ị wepụ nọmba ahụ site na listi ojii, lee ndepụta nke akpọchibidoro (nke a na-efughi) na ihe ndị ọzọ bara uru.
Ịkwụsị nọmba na MTS
A na - ejikọta "Black List" ọrụ na MTS site na iji arịrịọ USSD *111*442# (ma ọ bụ site na akaụntụ onwe onye), ụgwọ - 1.5 rubles kwa ụbọchị.
A na-egbochi mkpọchi nke nọmba kpọmkwem site na iji arịrịọ *442# ma ọ bụ izipu SMS na nọmba na-enweghị ego 4424 na ederede 22 * nọmba_which_indicate_block.
Maka ọrụ ahụ, nhọrọ ịmepụta maka omume dị (onye na-edebanye aha adịghị ma ọ bụ ọrụ), na-abanye nọmba "leta" (mkpụrụedemede), yana usoro maka igbochi oku na weebụsaịtị bl.mts.ru. Ọnụ ọgụgụ ụlọ ndị nwere ike igbochi bụ 300.
Nọmba mkpọchi Beeline
Beeline na-enye ike ịtinye na ndepụta nchịkọta 40 nọmba maka 1 ruble kwa ụbọchị. Ọrụ USSD na-arụ ọrụ ahụ: *110*771#
Iji gbochie nọmba, jiri iwu ahụ * 110 * 771 * number_for_blocking # (n'ụdị mba niile, malite na +7).
Rịba ama: na Beeline, dị ka m ghọtara ya, a na-ebokwu rubles 3 ruuru maka ịgbakwunye nọmba na blacklist (ndị ọrụ ndị ọzọ adịghị enweta ụgwọ dị otú ahụ).
Ọnụ ego nke igbochi nọmba na Megaphone - 1.5 rubles kwa ụbọchị. A na-arụ ọrụ ahụ site na iji arịrịọ *130#
Mgbe ịmechara ọrụ ahụ, ịnwere ike itinye nọmba ahụ na ndị ojii na-eji arịrịọ ahụ * 130 * nọmba # (o doro anya na usoro ọ bụla kwesịrị ekwesị iji - na ihe nlereanya nke Megaphone, a na-eji nọmba ahụ malite na 9, ma echere m na usoro ịntanetị kwesịrị ịrụ ọrụ).
Mgbe ị na-akpọ site na nọmba a gbochie, onye debanyere aha ga-anụ ozi "Nọmba na-ezighị ezi".
Echere m na ihe ọmụma ahụ ga-aba uru ma, ọ bụrụ na ịkwesịrị ịkpọghị nọmba ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ ụfọdụ, otu n'ime ụzọ ndị ahụ ga-eme ka ọ rụọ ọrụ.